filazantsaramada – Page 64 – Just another WordPress.com site
Mino izay ambaran’ny Baiboly
« Izay tsy niaro ny zananilahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra? » (Romana 8:32)
Maro ny olona no manambara ny finoany aminn’ny maha-Kristiana azy saingy amin’ny teny tsy mazava tsara. Ny an’i Filipe Alou kosa, ilay mpanazatra ny ekipa-na base-ball antsoina hoe « Expos » ao Montreal, dia novantaniny hoe: « Mino izay rehetra voalazan’ny Baiboly aho. Mino ny fisoronana lehibe, nohon’ny fahotako, izay nataon’Andriamanitra tao amin’ny Zananilahy aho. »
Izany ka fanekem-pinoana mazava an’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, amin’ny maha-Mpamonjy ny olona tsirairay Azy. Izany no finoana mahavonjy. Jesosy tenany dia manambara fa « Tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay »(Jaona 3:16).
Tao Filipy fahizay, rehefa nivoha ny varavaran’ny fonja rehetra taorian’ilay horohorontany izay nisy tamin’izay, dia nanontany an’i Paoly sy Silasy ilay mpiandry tranomaizina, hendratrendratra be ihany « Inona no mety hataoko, mba hovonjena aho? » Dia novaliany hoe, « Minoa an’i Jesosy Tompo » (Asa. 16: 30-31). Azontsika antoka fa alohan’ny nanaovana batisa azy sy ny ankohonany, dia nohazavain’ireo mpianatra ny asa izay nataon’i Jesosy ho famonjena ny olona rehetra – dia Izy maty teo ambony hazofijaliana ka nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo.
Tsy mba nahafantatra ireo vavolombelona voalohany nanatrika, toa an’i Paoly sy Silasy, izay nitory ny fanavotana nataon’i Kristy sy ny fitsanganany tamin’ny maty isika. Kanefa tena ananantsika kosa, voarakitra an-tsoratra, ny teny nambaran’izy ireo. Ny Tenin’Andriamanitra voasoratra izany, izay vavolombelona manambara an’i Jesosy sy ny fahafenoan’ny asam-panonerana izay nataony tamin’ny nanolorany ny ainy. I Alou, voalaza ery ambony, dia nanana boky tondrozotra izay nitarika azy tamin’ny asany amin’ny maha mpanazatra ekipa-na base-ball azy; toy izany ihany, manana ny Baiboly koa izy manoro azy ny lalana mankany amin’ny fiainana mandrakizay. Ny tena zava-dehibe dia tsy ny fananana ny Baiboly fotsiny fa indrindra ny fitandremana ny teny izay voarakitra ao, mba hitehirizana ao am-po ny fampianarana izay atolony.
Ao amin’ny Romana toko fahavalo, dia misy famintinana nataon’i Paoly ny amin’ny fampanantenana (na ny teny fikasana) sy ny voaloham-bokatry ny fisoronana lehibe vitan’i Kristy. Raha nanao izany tamin’ny fahafenoana ve ny Ray izay any an-danitra, tsy hanome antsika toy izany koa izay ilaintsika sy angatahintsika amin’ny anaran’i Jesosy ve Izy?
Publié parfilazantsaramada août 1, 2011 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Mino izay ambaran’ny Baiboly
Publié parfilazantsaramada juillet 7, 2011 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiantohana feno ao amin’i Kristy.
Publié parfilazantsaramada juin 27, 2011 juin 27, 2011 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VATSIM-PANAHY
Publié parfilazantsaramada avril 29, 2011 avril 29, 2011 Publié dansUncategorizedUn commentaire sur Vatsim-panahy
Articles plus récents 1 … 62 63 64